Archive du 20190402
Marc Ravalomanana Mandeha ny fanilo miampita
Nohamafisin’ny filoha nasionalin’ny Antoko Tiako I Madagasikara Marc Ravalomanana ny faran’ny herinandro teo, fa tanjon’ny TIMK25 ny hamerenana indray ny hasin’izany hoe antenimieram-pirenena izany.
Raharimanarivo Voahangy “Tombony ho ahy ny traikefa ananako”
“Tia mandray andraikitra sy manampy ny mpiarabelona aho, tsy mba mihemotra manoloana ny sarotra. Efa toetrako izany”.
Fifidianana solombavambahoaka Hafa ihany ireo kandida voafehin’ny antoko, hoy ny VOT
Naneho ny heviny mikasika ny fifidianana solombavambahoaka hotanterahina amin’ny volana mey ho avy io ny Vondron’Olon-Tsotra ( VOT), tarihin-dRtoa Sarah Zoe.
Marc Ramiaranjatovo “Tokony hijanona ho tsy miankina ny depiote”
“Raha te handroso isika dia tokony hanana solombavambahoaka matihanina. Tokony ho depiote manampahaizana sy nianatra”, hoy i Marc Ramiaranjatovo,
Rajoelina any Sénégal Midoka ny hafa sisa fa tsy misy hapoaka…
Any Sénégal nanomboka ny alahady 31 martsa teo ny filoham-pirenena ankehitriny, izay notsenain’ny filohany Macky Sall mivady teo am-pahatongavana teo amin’ny seranam-piaramanidina Leopold Sédar Senghor ao Dakar.
Antoko politika Natiora “Aleo ny politika ho an’ny mpanao politika.”
Ho avy ny fifidianana solombavambahoaka ka dia mahitsy aho miteny, hoy ny filohan’ny antoko politika Natiora, Mihari – Ni – Rencho, fa tsy mandeha amin’izay izy ny fandehany.
Mpiasan`ny fananantany Andrasana anio ny fanapahan-kevitra
Taorian`ny fanmbarana nataon`ny mpiasan’ny fananantany ny herinandro lasa teo, nisy ny fihaonana tamin`ny ekipan`ny minisitra tompon’andraikitra (Staff) ary nisy ny marimaritra iraisana tamin`ny roa tonta.
Ambodirano-Ampefiloha sy 67Ha Tra-tehaka ireo mpanondran’olona mankany Arabia Saodita
Rehefa tonga any an-toerana nifanarahana fa ireo vehivavy Malagasy aondrana, dia 2.500.000 Ariary isaky ny olona alefa any Arabia Saodita sy Oman no azon’ireo mpanondrana any ivelany avy amin’ireo mpandray andriambavilanitra.
Varotra rongony mahery vaika Mpianatr’Ankatso voasambotra
Mpianatra avy ao amin’Anjerimanontolo no mpiketrika ny varotra an-tsokosoko mahadomelina. Lehilahy iray no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny « STUP » noho io resaka io ny zoma 29 martsa lasa teny Ampefiloha, noho ny vaovao azon’ny polisy.
Baolina kitra eny amin’ny fokontany Natao hiarovana ireo tanora tsy hanaotao foana
Mba hiarovana ireo tanora eto amintsika tsy hidoroka mahadomelina na hirona amin’ny fangalarana rehefa tsy misy hatao dia nosokafana ny
Ekipa voafantin’ny Abq Rugby Miditra amin’ny fampivondronana
Mpilalao rugby mpikambana ao amin’ny Abq « Association du Bas Quartier » niisa 120 no niditra amin’ny fampivondronana teny amin’ny kianjan’Androhibe,
Fantatra tamin’ny alahady 31 martsa 2019 teo tetsy amin’ny kianjan’ny Ans Ampefiloha ireo ekipa 16 voalohany tafita hiatrika ny “Grande Finale 2019”
Mihaingo ambony tsikoko hatrany
Any ampitan-dranomasina ny filohantsika, izay tena miedinedina sy mirehareha ery fa izy, hono, no vahiny manan-kaja amin’ny lanonana hanasan-dry zareo Sonegaly azy.
Môtô nifatratra tany an-kady Avotra izy mivady, maty ilay zazakely
Nisehoana loza mahatsiravina teny Anjomakely Bongatsara ny alahady hariva lasa teo tokony ho tamin’ny 7 ora.
Aponga Malagasy Hampahafantarin-dRagasy etsy amin’ny AFT Andavamamba
Zava-maneno iray tena manana ny maha izy azy amintsika Malagasy ny aponga, raha araka ny fanazavan-dRagasy, mpanakanto havanana amin’ny fanamboarana sy filalaovana ity zava-maneno iray ity.
Andravoahangy Nampidirina anaty tsena ireo mpivarotra amoron-dalana
Nanomboka omaly fiandohan’ny volana aprily ny hetsika fandaminana sy fanadiovana ny tsenan’Andravoahangy sy ny manodidina, izay tanterahin’ny Boriborintany fahatelo, kaominina Antananarivo Renivohitra.
Rano fisotro madio maimaimpoana Tokony hatao laharam-pahamehana, hoy i José Bandy Akama
Ao anatin’ny fiomanana ny fiatrehana ny fifidianana ho solombavambahoaka isika izao. Efa mihetsiketsika araka izay tratrany ireo kandida hifaninana. Ao ireo efa nanara-maso ny fiainan’ny mponina teny amin’ny distrika ilatsahany.
Fiaraha-mientan’ny mpiasam-panjakana Malagasy Miandry ny fanatsarana ny karamany
23 taona no efa nanomezan’ny fiaraha-mientan’ny mpiasam-panjakana Malagasy na F3M soso-kevitra ny amin’ny mba hijerena ny tontolon’ny karaman’ny mpiasa eto Madagasikara, hoy ny filohany, Florentin Ramamonjisoa.
Fanatontoloana Mahazo tombony be i Sina
Tsy azo ihodivirana ny fidirana amin’ny fanatontoloana amin’izao fotoana izao. Matetika sady hita soritra anefa fa ny firenena tena matanjaka no misitraka ny tombony ary saika matiantoka hatrany ny firenena mahantra tahaka an’i Madagasikara.